Apple zvakare inotangisa yechitatu beta yeTVOS 11.2 uye watchOS 4.2 | Ndinobva mac
Pamusoro peiyo beta 3 vhezheni ye macOS Yakakwira Sierra 10.13.2 yevagadziri yakatangwa maminetsi mashoma apfuura naApple, vakomana veCupertino vakaburitsa mamwe ese mavhezheni beta 3 yevagadziri, tvOS 11.2 uye watchOS 4.2. Muzviitiko zvese izvi, nhau dzinotaridza kushomeka uye hatigone kutaura kuti kutanga ivo vane nhau dzakakosha kudarika zvakajairika kugadzirisa zvipuka, kugadzirisa mukugadzikana kwesisitimu uye zvimwe zvishoma.
Chero zvazvingaitika, chinhu chakakosha ndechekuti Vanosvika nenguva yekugadzwa kwavo neMuvhuro uye kwenguva yakati ikozvino Cupertino kambani yanga ichiburitsa iyo nyowani vhezheni kune vanogadzira pazuva rimwe chete, izvi zvakanaka sezvo zvese zvichitevera mutinhimira mutinhimira uye zvinonyanya kunetsa kubatanidzwa neshanduro dziripo.
Chii chitsva muTVOS 11.2 beta 3 inotarisawo pakuvandudza kwesisitimu senge muWOSOS 4.2 beta 3 paApple Watch. Shanduro dzeBeta dzinogamuchirwa zvakanaka nenharaunda kunyangwe dzichiteverwa (vhiki nevhiki), asi ndiyo nzira yakanakisa yekuvandudza mashandiro uye matambudziko ekugadzirisa uye saka zvinogara zvakanaka kuti vagadziri vane idzi beta.
Pasina kupokana, kuva nezvose zvakarongeka kwakakosha kune vanogadzira nevashandisi, nekuti zviri nyore kuve nemasimba ezvinyorwa zviripo uye uwane ruzivo rwuri nani pasvondo. Zvinogoneka kuti mangwana, Chipiri, kana zvese zviri munzira chaiyo uye pasina kukundikana iwo mavhezheni evashandisi akanyoreswa muchirongwa cheveruzhinji beta.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple zvakare inotangisa yechitatu beta yeTVOS 11.2 uye watchOS 4.2
DiRT Rally inenge iine zuva rekuburitsa zviri pamutemo revashandisi veMacOS
Nike Inotangisa Apple Tarisa Nike + Series 3 Iine Nyowani Midnight Fog Band